Dainik Headlines - Page2of 490 - Nepali Khabar from Nepal
बिना अप्रेशन पाइल्स रोगबाट छुटकारा पाउन अपनाउनुहोस् यि घरेलु उपाय
March 15, 2019	Healthy Life 0
काठमाडौँ । अचेल धेरै जसो मानिसहरु पाइल्स समस्याको शिकार भएको पाइन्छ । मानिसको दिशा गर्ने ठाउँवरिपरि रहेका रक्तनशाहरु विविध कारणबाट सुन्निएको या मांसपेशीका अङ्कुरहरुको आकार बढ्न गएमा यस स्थितिलाई पाइल्स भनिन्छ । यो अवस्था बढ्दै जाँदा मांशपेशीको आकार चनाको दाना जत्रो सम्म हुन पुग्छ र दिशा गर्दा पीडा हुन थाल्छ …
राशि अनुसार जान्नुहोस्, कुन व्यक्तिको प्रेम प्रतिको स्वभाव कस्तो हुन्छ ?
March 15, 2019	Dharma 0
जीवनको कुनै न कुनै समयमा मानिस प्रेममा पर्छ । प्रेम नितान्त निजी विश्वासमा आधारित हुने कुरा हो । प्रेमबारे मानिसका धारणा फरक फरक हुन्छन् तर सबैलाई आफ्नो पार्टनरको विषयमा चिन्ता र चासो हुन्छ । हरेक मानिसको प्रेमिल स्वभाव फरक फरक हुन्छ । कसले तपाइँलाई मायाँ गर्छ र कस्ले धोका दिन्छ …
March 14, 2019	Healthy Life 0
शंख बजाउँनुस अनि यी फाईदा लिनुस्..
March 14, 2019	Dharma 0
हिन्दु धर्ममा शंखलाई निक्कै नै पवित्र र शुभ मानिन्छ । त्यसै कारण पूजा पाठको आरम्भ गर्दा पहिला शंख बजाईन्छ । धार्मिक मान्यता यो छ कि शंख बजाएर कार्य गर्दा राम्रो फल प्राप्त हुन्छ। यति तपाईले शंखको राज थाहा पाउँनु भयो भने तपाई साझ र बिहान शंख नबजाई बस्नै सक्नु हुन्न …
के तपाइको कुण्डलीमा शनिको दोष छ ? गणेशजीको अराधानाले यसरी मेटाउन सकिन्छ शनिको दोष…
March 13, 2019	Dharma 0
के तपाईंलाई शनिको महादशाले सताईरहेको छ ? मिलेको काम पनि बिग्रन्छ ? त्यसोभए कुण्डलीमा शनिको दोष भएको हुनसक्छ। शनि बिध्न र बाधाको देब हुन्। यदि कुण्डलीमा शनि खराब छ भने जिवनमा समस्या पर्छ र सुख-शान्ति मिल्दैन। बन्न लागेका पनि सबै काम बिग्रन्छन् र कुनै पनि उपायले समाधान हुदैनन्। तर नडराउनुस …
March 7, 2019	Healthy Life 0
भोला रिजाल/ स्त्री तथा प्रसूति, रोग विशेषज्ञ महिला वा पुरुष दुवैको कारण निःसन्तानको समस्या हुन सक्छ । कुनै दम्पतीबाट सन्तान नभएको खण्डमा श्रीमान्–श्रीमती नै भागीदार हुन्छन् । अहिले पनि अशिक्षित समाजमा निःसन्तानको कारक महिलालाई मात्र मानिन्छ जुन गलत छ । यी हुन् पुरुषमा निःसन्तान हुनाका कारण : शुक्रकीटको खराबी पुरुषको …
March 6, 2019	Healthy Life 0
सामान्यतया बिहान उठ्नेबित्तिकै कफी या चिया पिउन सबैले रुचाउँछन् । तर, खाली पेटमा यसरी चिया वा कफी पिउने बानी गलत भएको बताउँछन चिकित्सकहरू । चिया वा कफीको साटो हरेक बिहान उठेर लौकाको जुस पिउनु निकै राम्रो हुने चिकित्सकहरूको सुझाब छ । उसो त लौकाको जुस कफी र चियाको जस्तो स्वादिलो …
प्याज खाँदा हुने यी ६ वटा फाइदाहरु
काठमाडौं । आयुर्वेद विद्याका अनुसार प्याज निकै गुणकारी बस्तु हो । प्याजले खानालाई स्वादिष्ठ बनाउने काम त गर्छनै यो एक औषधि समेत हो । कयौं विरामीलाई यसले औषधिको काम गर्दछ । प्याज हाम्रो शरिरको लागि वरदान हो । प्याजले हाम्रो शरिरको रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई अधिक मात्रामा बढाउने गर्छ । यो …
खादा कति पयलाई करेलाको तितो स्वाद मन पर्दैन त कति पयलाई अत्याधिक मन पर्छ । स्वादका हिसावले मन पर्नु अथवा नपर्नु भन्दा स्वास्थ्यका हिसावले कस्ता खाले मानिसले करेलाको सेवन गर्नु हुन्छ भनेर सामान्य जानकारी राख्नु अत्यावस्यक छ । करेला एन्टिअक्सिडेन्ट र भिटामिनले भरिपूर्ण हुन्छ । करेलामा भिटामिन ए, भिटामिन बि, …
मृर्गौलामा खराबी आउने दश कारणहरु यस्ता छन्
हाम्रो शरीरको महत्वपूर्ण अंग मध्ये एक अङ्ग मृगौला । जसले हाम्रो शरिरमा रगतलाई सफा गर्ने, हर्मोनहरु उत्पादन गर्ने, पिसाबलाई सफा गर्ने, र शरिरमा भएका अनावश्यक फोहरहरुलाई पिसाबको माध्यम बाट बाहिर फाल्ने,शरिरमा एसिडको मात्रा मिलाउने काम गर्दछ । तर पछिल्लो समय प्रदुषण लगायत विभिन्न कारणले गर्दा मृगौला रोगीको सङख्या बढिरहेको छ …